Benzema Oo Yiri: "Liverpool Waa Isla Tii Aan Koobka Ka Qaadnay" & Sadio Mane Oo U Jawaabay - Laacib
HomeWararka Champions LeagueBenzema Oo Yiri: “Liverpool Waa Isla Tii Aan Koobka Ka Qaadnay” & Sadio Mane Oo U Jawaabay
Benzema Oo Yiri: “Liverpool Waa Isla Tii Aan Koobka Ka Qaadnay” & Sadio Mane Oo U Jawaabay
Karim Benzema ayaa isku dayay inuu qalqalgeliyo Liverpool ka hor finalka Champions League laakiin waxaa dhegaha ka fureystay Sadio Mane oo jawaab waafi ah ka bixiyay.
Reds iyo Real Madrid ayaa kulanka finalka Champions League ku ciyaaraya magaalada Paris maalinta Sabtida. Benzema ayaana isku dayay inuu qalqaliyo Liverpool isagoo soo jeediyay in Liverpool aysan waxba iska bedelin tan iyo markii ay koobka ka qaadeen afar sannadood ka hor.
Labadaan kooxood ayaa ku kulmay finalkii 2018 taasoo keentay in Real Madrid ay koobka qaado ka dib qaladaad goolhaye uu sameeyay Loris Karius iyo gool cajiib ah uu dhaliyay Gareth Bale.
Isbedelo badan ayuu Jurgen Klopp ku sameeyay kooxdiisa Liverpool tan iyo habeenkaas Kyiv laakiin Benzema ayaa aaminsan si taasi ka duwan:
“Aad ayay u fiican yihiin” ayuu yiri Benzema. “Wax badan isma aysan bedelin mudadii sannadaha aheyd. Laakiin ugu danbeyn waxaan eegi doonaa kaliya ciyaarteena. Haddii aan ciyaarno kubadeena, markaas wixii dhici lahaa ayaa dhacaya. Kalsooni ayaan qabaa.”
Shaxda Liverpool ee kulankii finalka 2018 waxaa ku jiray xiddigo aan kooxda ku sugneyn haatan sida Ozan Kabak iyo Nat Phillips sidaasi darteed Benzema ayay ku noqon doontaa lama filaan inuu ka horyimaado Virgil van Dijk iyo Joel Matip.
Sadio Mane oo u jawaabayay Benzema ayaa sheegay in kooxdiisa ay aad uga fiican tahay sidii ay aheyd afar sannadood ka hor:
“Wax cadaadis ah inama saarna, gabi ahaanba cadaadis ma jiro” ayuu yiri Mane.
“Waxaan aaminsanahay mudadii afarta sanno aheyd wax badan ayaa isbedelay, waan ka qibrad badanahay sidii hore, tayada kooxdana sarre ayay u kacday.
“Waxaan qabaa inay kaliya tahay kulan xiiso leh, waxaan aaminsanahay inaan dhamaanteen iska ilownay wixii dhacay 2018, Real Madrid waxay markaas aheyd kooxda fiican, waa ay u qalmeen guushii finalka, hambalyo laakiin kulankaan waa mid ka duwan kii hore.”
Dad dadaalaya oo wakhti gelinaya ayad tihiin inan idin caayo sida dadka kale ma jecli balse inaad waxa aad qoreysaan hubisaan re-edit ku sameysaan weeyi inta aydaan daabicin. Ozan kabak iyo nat Philips ayad ku sheegtay in shaxda uu ka horyimid ee 2018 finalka ay ahayd. Ozan kabak sow ma ahayn ninkii la keenay xili ciyaareedkii hore markii Van dijk dhaawacmay. Finalkii 2018 Van dijk sow sannadkii uu kacsnaa meynan ahayn Ileyn kii ku xigeyba iyagaa qaadaye. Almiino dhaha xili ciyaareedkii hore quarter final ka markay ku kulmeen. Lkn 5 sano ka hor ma noqon karto. Nat Philips na hadadlkiisaba daa.